Ngaphandle igrisi asikwazi eziqhutshwa ukucutshungulwa metal esimanjemanje kakhulu. Kulokhu, izakhi metallic ngokwabo, ezisetshenziswa inqubo ingase nezimfuneko obusebenzayo ngaphandle isevisi ejenti ekhethekile. Kuze kube manje, ukusika uketshezi (kokupholisayo) imakethwa emagameni angaphezu kuka-600. Phakathi kwabo singathola imali ukuze kusetshenziswe amandla amayunithi ukusetshenziswa ekucubungululeni metal, kanye zokwelapha, ukwahlukanisa, formorazdelyayuschie, uwoyela yemvelo anti-ukugqwala. Iningi ketshezi esetshenziswa umkhakha futhi embonini yezokwakha.
Yiziphi ngensimbi uketshezi?
Ngo zokugcoba kakhulu yethulwe zingene esikhaleni zokusebenza emkhatsini wetincenye teluhlaka ukuhilizisana ukuze sinciphise bafake etindlela. Ngokuvamile lesi sici kwahambisana by an wukumelana. Nokho, Kodwa lokhu kusebenza ngezinto zesintu zalolu hlobo, izinto ukupholisa ezidingekayo futhi ukuvikela imishini futhi izakhi ukusebenza okweqile. Ngokwesibonelo, Ukupholisa zokugcoba ngoba ngensimbi uvumele nokwandisa lokushisa nokucindezelwa ukuhlala okusezingeni eliphezulu. enano yalokho, ivumela nje kuphela ukuba ugcine ukusebenza abagawula, kodwa futhi uthuthukise ukusebenza izihloko okuholela. Kukhona futhi ezikhethekile izindlela zokuzivikela lapho kugcizelelwa ekuniketeleni ukugqwala, nangokuvikela futhi uphawu izakhiwo. Lesi sigaba indaba ezivamile ekwakheni.
Noma yimuphi igrisi senziwa iresiphi ekhethekile. Kukhona izingoma eziyisisekelo zokulawula, kanye ukuhlela kabusha, iziphi uzilungiselele ukunikela ukusebenza ethize. Ngokuvamile, isisekelo ukhonza ongaphakeme-viscosity uwoyela ingxube. Ikhishwa therefrom coolants, okuyinto Ukwakheka nayo Ushintshe upharafini kampompi ukuxova umuthi wokugoma, zinc dialkyldithiophosphates, mnogozolnym calcium sulfonate, nezinye izithasiselo. izingoma ezinjalo ngokuvamile elisetshenziswa cutting of ukushisa Alloys ukumelana futhi engagqwali izingxenye steel. Izici yesenzo lokhu kwakwakhe ukuvimbela Ukwakha-up of material ithuluzi. Bajikeleza futhi ngokusebenzisa viscosity ongaphakeme njengoba base ingxenyenamba glubokogidrirovannoy ongahluziwe omuncu. Ukusebenza uketshezi ukusetshenziswa kule ngesisekelo imishini EDM lamadigri amandla obuhlukahlukene, ukuqaliswa kokuphothula turning imisebenzi kanye Smith zokukhiqiza imigqa.
Izici Main uketshezi
Ukubukeka izici uketshezi enjalo ziyahlukahluka kakhulu kuye ngokuthi izithasiselo esetshenziswa. Ngokuvamile, lena ongaphakeme viscosity mass brown, shades zazo zingahluka. Ngokombono walaba umsebenzi ukusebenza esinye sezici ezibaluleke kakhulu iyona kwabantu. Standard igrisi Ukwakheka nge ukupholisa umphumela lunesibalo ku uhla kusukela ngo-1100 kuya ku-1200 kg / m 3. Nokho, kungenzeka leli isilinganiso nhlobonhlobo ngesikhathi umkhiqizo ukugxilisa ingqondo. Futhi coolants aqukethe ion asebenzayo ngezakhiwo ezithile. 1% isixazululo aqueous yalesi value kungaba mayelana 10 pH. Abakhiqizi Ngokuvamile zitusa ukusetshenziswa izingoma kanzulu ezingaba ngu-1-3%. Kodwa kuncike indawo ukusebenza owenziwayo kanye impahla target, lesi silinganiso zingandiswa. Ngakho, kutuswa ukusebenzisa CONCENTRATE 4-hprotsentny, nensimbi eziyinkimbinkimbi ukwanda index afika kwangu-7% futhi umsebenzi ukugaywa.
Izici ngokombono kokupholisayo
Kukhona izindlela ezehlukene kwezidingo, isicelo nokusatshalaliswa uketshezi obusebenzayo evele Lubrication. Akubona bonke babo babe izidingo esikhethekile zokugcoba ngokuya Izakhiwo, kodwa kwezinye izimo kubaluleke ngoba ukucacisa uhlobo nokuxhumana medium. Ekugcineni, lokhu kuthinta nekusebenta umsebenzi we ketshezi uqobo. Ngokwesibonelo, uma kokupholisayo ngoba umshini ngensimbi amathuluzi, bese kuqhame ijubane ukusakaza okuphakelayo. Ngakho, izingxenye lula, ephumelelayo ngaphezulu kuyoba Lubrication yelunga ukusika ngesikhatsi kokuhlinzwa. Futhi uyakucabangela ingxenyenamba izinhlayiya ngabanye in uketshezi. Ngezinye okusezingeni eliphezulu okuphakelayo amazinga, angabawa zibulale izakhiwo ebusweni, deforming ke. Ngaphezu kwalokho, umshini opharetha kufanele inake nezinga lokushisa elizosetshenziswa kule jet futhi uyakucabangela izinguquko okungenzeka ukuthi izindinganiso zalabo noma ezinye izimo kwendawo ukusebenza.
izakhiwo zobuchwepheshe ukusebenza
izimfanelo eziyisisekelo yilezo ukuqinisekisa Ukupholisa elilungile kanye nomphumela lubricating. Kwezinye izindawo nezidingo ephezulu yokuhlanza ukusebenza, okuvumela inqubo mshini ngendlela esifike ngesikhathi ukuhlanza ebusweni izingxenye. izinga engeziwe, okuyinto afakwa yesimanje ahlabayo uketshezi, zihlanganisa amagciwane, ngesimiso semvelo, inhlanzeko, chemical ukumelana naso futhi kwenze eshisa kakhulu. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi izingxenye lubricating futhi azinikele a eside nemiphumela chemical ku ezihlukahlukene izinto, ngakho kukhethwa izindlela kufanele kuhlaziywe ngokumelene izinga lalolu ketshezi indaba target.
Ukwahlukaniswa main lubricating uketshezi nomphumela ukupholisa kusekelwe umsuka izindlela. Okuvame kakhulu amafutha zezimboni, ezisetshenziswa umkhakha futhi emkhakheni wezimboni. Isikhathi esiningi kuba amafutha liquid, kulekelelwa modifiers. Omunye ezichumayo lezi izithasiselo nazo amaqhafuqhafu bahlakazeka uwoyela emulsion, okuyinto kwakheka medium aqueous. • Inhlalo engenayo inxushunxushu microemulsion izinhlobo coolants vumela ukwakha compounds semisynthetic noma zokwenziwa organic based. Ziye zanda futhi Fast ahwamukayo ongaphakeme ukubila ingxube, esekelwe hydrocarbon halogenated ne izithasiselo.
Inqubo esetshenziswa kabanzi zokugcoba etholwe ukukhiqizwa metal izingxenye, kanye ukucutshungulwa yabo. Abenzi kuphela ukuvikela imishini ukusebenza kusukela bafake ngaphambi kwesikhathi, kodwa futhi ngcono ikhwalithi imikhiqizo ekhiqizwa. indawo Okwesibili isidingo izinto ezinjalo akunakubangelwa embonini yezokwakha. Kulesi umkhakha, ukusetshenziswa coolants kubangelwa isifiso ukunikeza izimfanelo zokuzivikela zokwakha, zokuhlobisa ezinengilazi nangokuvikela.
Phakathi abakhiqizi elikhulu kokupholisayo ungabahlukanisa inkampani Proma, "Univeko" futhi "Messer". brand Okokuqala isibe odumile ngokusebenzisa Ukukhishwa izindlela ephumelelayo ngokuphepha kucutshungulwa izinsimbi izindlela abandayo kanye ashisayo. Umsebenzisi Izibuyekezo ketshezi aveze ukuthi inqubo ukukhiqizwa kungenzeka ukunciphisa ukusebenza umshado, ngcono ukukhiqiza futhi ukwandisa kunembile. "Univeko" inkampani esungulwe ezingeni samanje kanye ukukhiqizwa uketshezi lubricating. Leli qembu compounds senziwa okusekelwe ukugqwala inhibitor futhi isebenze imvelo aqueous, okuyinto lwaziswa ngokukhethekile abathengi ukwakhiwa wemboni. Ngokuqondene brand "Messer", imikhiqizo yayo ngokwethukela kusetshenziswa kakhulu e ephezulu ukucacisa machining imisebenzi. Izinzuzo ezinjalo abasebenzisi uketshezi zihlanganisa okusezingeni eliphezulu izakhiwo anticorrosive ukuba mikrobobrozheniyu ukumelana, nokuhlanzeka kwemvelo.
Modern ubuchwepheshe ukucutshungulwa metal izingxenye kancane sisuka izindlela ezivamile mechanical ithonya. Ngenxa yalokhu, futhi yehlise ukusetshenziswa zokuzivikela futhi ukwandisa nokusimama kwezinsiza imishini. Noma kunjalo-ke namanje umkhakha lapho ukusika uketshezi esasebenza. Lena ngokuyinhloko ukwakhiwa, ubunjiniyela, imithi kanye nobunjiniyela bukagesi. Enye into ukuthi kakhulu ezindaweni ezikhethekile ezidinga eyinkimbinkimbi ngaphezulu izakhiwo zabo lobuchwepheshe nokusebenza materials, ezidinga ukusetshenziswa kwezindlela zobuchwepheshe obuphambili izithasiselo futhi modifiers.
"ISiphepho" (MRL). Russian MLRS 9K57 "iSiphepho"
Izindlu ezakhiwe ngokhuni - ngaphakathi ingaphakathi. Ikhishi kanye eziphilayo ikamelo indlu yamapulangwe
Pol Gaskoyn, football player: Biography, ukuphila siqu, kwezemidlalo